Iza amin'ireo tetikady SEO eo amin'ny sehatry ny SEO no hitarika amin'ny 2019?
Raha te hanapaka ny valin'ny fikarohana Google ianao amin'ny taona manaraka dia hahasoa anao ity lahatsoratra ity. Hiresaka momba ny fiovana miandry antsika amin'ny taona 2018 isika ary ny paikady handinihan-tena dia tokony hampiharina mba hahazoana vokatra tsara kokoa amin'ny herintaona.
Ny fikarakarana rohy dia tokony hividianana rohy raha mbola misy foana ny ampahany amin'ny algorithm Google ary tokony hapetraka ao am-pon'ilay fanentanana fanentanana tranonkala.
Misy manam-pahaizana momba ny SEO milaza fa tsy misy dikany ny rohin'ny tranonkala ho an'ny tanjona SEO. Ny hafa dia milaza fa ny andraikitry ny backlinks ho an'ny tranokala dia nitohy nandritra ny taona maro. Ny fomba fijery samihafa manoloana an'io lafiny io dia afaka hazavaina amin'ny alàlan'ny famoahana ny asan'ny rohy sy ny fameperana ny spamming amin'ny rohy. Ankoatra izany, ny fisintonana Google Penguin dia nanova tanteraka ny andraikitry ny backlinks ao amin'ny SEO, izay mahatonga azy io ho sarotra kokoa amin'ny fantsona sira mifandraika amin'ny tranokala iray. Na izany aza, tsy misy zava-misy ireo hevitra sy fisorohana ireo. Ny fananganana fifandraisana dia mbola mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fananana tranonkala ary manangana ny fandraisana anjaranao amin'ny SERP.
Amin'izao fotoana izao, ireo andro izay namotsorana ny tetikadin'ny tranonkala spammy dia vokatry ny fahadisoam-panantenana. Androany, ny kalitaon'ny rohy miditra dia heverina ho avo kokoa noho ny habetsahany ary afaka manome ny ezaka SEO anao. Ankoatr'izay, ny famoronana fanampiana ho an'ny votoatin'ny mpampiasa dia tsy ilaina fotsiny fa koa tetik'asa matotra amin'ny fananganana rohy mankany amin'ny avo kokoa amin'ny valin'ny fikarohana. Mila mampiroborobo ny votoatin'ny mpihaino ianao ary mamoaka izany amin'ny toerana stratejika. Koa satria ny backlinks dia heverina ho toy ny sanda raisin'ny Google, raha tsy manao izany dia hametra kely ny ezaka fanatsarana ny fikarohana ataonao.
Manontany tena ve ianao hoe inona no fiovana vaovao sy fanavaozana izay azontsika iainana amin'ny sehatra backlinks SEO amin'ny 2019? Anatin'ity lahatsoratra ity, hitanao ny vinavina sasany ho an'ny taona manaraka sy fomba hafa izay hanampy anao hanohy ny tontolon'ny tsena digital.
Toro-làlam-peo SEO amin'ny taona 2019
Mbola eo ny mpanjaka
Alohan'ny ahafahanao manomboka mitady fifandraisana manatratra ireo mpampiasa ireo lahatsoratra vahiny, mila mamorona votoaty mifototra amin'ny fikarohana ianao ary manome ny mpamaky mety aminao antony iray ilàna rohy mankany amin'ny tranokalanao. Raha manomboka manamboatra saka fifandraisana avy amin'ny tranonkala manerantany ianao, dia maneho fa manana votoaty lehibe ny votoatinao ary mahaliana azy ny mpamaky. Amin'izao fotoana izao dia lasa mahira-tsaina kokoa ny milina fikarohana ary afaka manombantombana ny kalitao sy ny maha-tokana ny votoatiny. Tsy ampy ny mamorona lahatsoratra marobe ary manantena fa hanao izany fotsiny izy noho ny isan'ny teny soratanao. Ny ankehitriny sy ny taona manaraka dia hitovy ny toe-javatra. Google dia mitaky votoatim-pahalalàna avo lenta sy fikarohana izay nosoratana ho an'ny mpampiasa, fa tsy ho an'ny fikarohana bots.
Ny bilaoginy dia mbola iray amin'ireo fomba tsotra sy mahavariana amin'ny fitaterana ny fifamoivoizana to your site. Zava-dehibe, indostrialy manokana ary fomba nentim-paharazana hitondrana ny fifamoivoizana any amin'ny tranokalanao. Manome tombontsoa ny orinasa hanakarama ny orinasany izy ireo ary ho tonga saina amin'ny mpitarika ao amin'ny tsenany.
Hanatsara ny lahatsoratry ny blôginao koa ny SEO. Na dia izany aza, ny famoahana ireo bilaogy vahiny izay manana mpankafy maro sy mpamaky tsy tapaka dia ho fomba mahomby kokoa amin'ny fitaterana fifamoivoizana izay tsy azonao atao. Azo ekena ny hanaovana izany amin'ny tranokala isan-karazany. Noho izany, ny blaogin'ny vahiny dia toy ny fampiroboroboana ao amin'ny tranonkala izay tsy mitaky vola be dia be ary mitondra vokatra tsara Source .